Ny Business Online Vs. Mpifanaraka vaovao - 3 Torohevitra mahatalanjona avy amin'ny Semalt
Ny fanokafana magazay amin'ny aterineto dia asa tsotra. Ny fanokafana magazay ara-batana dia mety hofanamby sarotra. Tafiditra amin'izany ny rafitra toy ny fitehirizana entana, fametrahana fandaharam-pividianana fividianana banky sy fandoavam-bola amin'ny sehatry ny fivarotana. Na izany aza,Tsy toy izany ny e-varotra an-tserasera. Izay olona manana fahalalana fototra tsotra dia afaka manangana fanombohana ary manao ny vola miditra mendrikany loharanon-tserasera.
Miaraka amin'izany fahalalana izany ao an-tsaina, mazava ho azy fa misy ny fanombohana na ny orinasa midinaizay efa misy dia afaka miatrika fifaninanana matanjaka amin'ny fanombohana vaovao an-tserasera - отели подушка. Ny ankamaroan'ireo mpifaninana vaovao ireo dia mandany vola be amin'ny SEO sy dokambarotra an-tseraseramahazo tombony amin'ny tsenan'ny tsirairay.
Ny orinasa E-varotra izay manana fatiantoka maharitra dia afaka mifaninana amin'ny fanombohana toy izany,manaraka ny torohevitra nomen'i Nik Chaykovskiy, lehiben'ny Senior Customer Success Manager Semalt .
1. Ampiasao ireo fomba fitsaboana Creative Creative.
Ny fomba nentim-paharazana nentim-paharazana dia ny dokambarotra banner, ny PPC, ary ny vokatrafametrahana toeram-pivarotana mahomby toy ny Amazon sy Ebay. Na izany aza, ireo orinasa goavambe dia mampiasa fomba fitahirizana tahaka ny karazana referrôgaly. Ohatra,Ny orinasa iray dia afaka manangana gig, izay manasa mpanjifa mba handray anjara. Amin'ity fandraisana anjara ity, afaka mahazo ny safidy hanontaniana ny mpanjifairay hafa ho an'ny fihenam-bidy. Ireo fanavaozana toy izany dia mitarika amin'ny fivarotana bebe kokoa noho ny dokam-barotra PPC.
Ireo teknikam-pamokarana Content toy ny video tutorial mba hamporisika ireo mpanjifa efa misy..Sarimihetsika mediam-bahoaka sy mailaka manaraka ny fahafahana mizara. Ny fizarana dia tsara ho an'ny SEO ary ny fidirana amin'ny mpanjifa mivantana. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny olonaMizara ny votoaty ho an'ireo olona tonga mpanjifa avy hatrany.
2. Omeo ny sampan-draharahan'ny mpikarakara ny serivisy.
Ny fanomezana ny serivisy mpanjifa ambony dia tsy mivantana amin'ny mpifaninana vaovao. As retailerizay efa tao amin'ny orinasa efa ela, ity no sehatra izay efa nampiharana ny traikefanao. Ohatra, misy manana fahafahana hanome mpanjifakisendrasendra. Amin'ny toe-javatra sasany dia azonao atao ny mangataka ilay mpanjifany ho toy ny fampahalalam-baovao sosialy na hijery ny Google mihitsy aza. kintanaNy mpanjifa dia afaka mahafantatra ny mpanaraka azy ary mahazo mpitsidika vaovao.
3. Manomeza anjara manokana.
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ireo mpanjifanao tonga amin'ny mpifaninana vaovao dia ireo mpanjifanao taloha. SEOdia midika fa ny fizarana ny volan'ny fikaroham-bidy dia tsy misintona mitady mpikaroka hafa. Vokatr'izany dia mila paikady ianao mba hamerenana ny fototra amam-baibolinao taloha.Ny marketing maimaimpoana akaiky dia mety ho tetik'ady tsara. Afaka manomboka amin'ny alàlan'ny fisaorana ireo mpanjifany taloha ary manolotra fifanarahana amin'ny vidiny ambany.Amin'ny toe-javatra sasany dia anisao ny tolotra maimaim-poana amin'ny zavatra vidiana azony. Raha vao mandresy ny mpanjifanao ianao, dia afaka miverina amin'ny teknolojia ara-barotra taloha.
Maro amin'ireo mpandraharaha, izay manao raharaham-barotra an-tserasera, no miatrika fifaninanana mafynanomboka tamin'ny fanombohana. Ny olona misalasala mankany amin'ny varotra an-tserasera dia manao tontolon'ny teknolojia SEO ary koa rehefa misy mpifaninana vaovao mifandraika amin'ny sehatra,Misy ny fihenan'ny fifamoivoizana izay tonga eo amin'ny tranonkalanao. Io trangan-javatra io dia mahatonga ny fizotran'ny SEO manontolo ho lava toy ny mpifaninanadia mandray ny laharana amin'ny vokatra SERP, mahazo ny anjaranao amin'ny fifamoivoizana. Na izany aza, dia afaka mamerina ny raharaham-barotra amin'ny mahazatra, ary ny fifaninanana amin'izanynihena. Miaraka amin'ireo toro-hevitra etsy ambony, afaka mandresy ireo mpanjifanao ianao ary hamerina ny toerana ambony anao.